Xuquuqda bukaanka | Suomen Mielenterveysseura
Waaxda arimaha bulshadda iyo caafimaadka qofka bukaanka ah xuquuqdiisa waxaa dhowra sharciga bukaanka. Sharciga qaybihiisa ugu muhiimsan waa sida soo socota:
Bukaanku wuxuu xuquuq u leeyahay inuu helo daryeel wanaagsan
Xiliga dayeelka qofka waa in loo tixgaliyo luuqadiisa hooyo, arimihiisa qaaska ah iyo dhaqankiisa. Tusaale qofka ajanabiga ah ee wadanka sida rasmiga ah ugu nool haddii loo baahdo waa inuu helo turjubaan si uu u isticmaalo adeega waaxda caafimaadka.
Bukaanka waa in la wargaliyo waqtiga uu helayo daryeel. Haddii waqtigu is bedelo, qofka waa in la wargaliyo waqtiga cusub iyo sababta wax isu bedeleen isla markiiba.
Marka la hirgalinayo dayeelka haddii loo baahdo waa in la sameeyo baadhitaan, daryeel ama qaab kale oo daaweyn ah si qorsheysan.
Bukaanka waa in la siiyo cadeyn la xiriirta natiijadda baadhitaankiisa, daryeelka la siinayo wauxuu tareyo, waa in loo sheego qaababka kala duwan ee daryeela uu heli karo iyo mid walba dhibka uu keeni karto sidoo kale waa in loo sheego dhammaan waxyaabaha saameyn kara daryeelkiisa iyo ka go’aan gaaristiisa.
Qofka xanuunsan waa in la isla fahmo sida loo dabiibayo. Haddii qofku diido nooc ka mid ah daryeela, waa in iyadoo la eegayo suurtagalnimadda jirta si kale loo dabiibo is-fahamna uu ka jiro sida kale ee loo dabiibayo ee suurtagalka ha.
Haddii qof qaan-gaar ah uu dhibaato la xiriirta dhimirka, curyaanimo ama sabab kale awgeed uu awoodi waayo inuu go’aan ka gaaro dayeelka loo sameynayo, waxaa loo baahanyahay in la dhageysto qof sharciyan wakiil u ah qofka xanuunsan ama qof qoyska ama qaraabadda ah si loo ogaado dayeelka ugu macquulsan ee qofkaas loo sameyn karo. Haddii taas wax lagu waayo, qofka waa in loo daweeyo ama loo dabiibo sida ugu wanaagsan ee qofkaas khaqsiyan ku haboon.
Bukaanku wuxuu xaq u leeyahay inuu eego qoraaladda isaga quseeya haddii wax ka qaldan yihiina uu saxo.
Qofka qoraaladda quseeya waa sir. Qofka khibradlaha ah ee caafimaadka ka shaqeynaya ama qofka hawlahaas gacanta ku haya si kastaba ha ahaatee ma bixin karo qoraaladda khuseeya qofka bukaanka ah haddii qofkaas aan laga haynin qoraal uu ku ogolaanayo arintaas.
Qofku haddii uusan ku qanac-saneyn dayeelka loo fidinayo arintaas wuu xusuusin karaa waaxda caafimaadka ee arintu quseyso.
Waaxda caafimaadka waa inay lahaato qof u qaabilsan arimaha bukaanka.
Sharciga dhimirka wuxuu qeexayaa xuquuqda bukaanka tusaale marka ogolaansho la’aan la daryeelayo.
Dayeelka si fasax la’aan ah qofka bukaanka ah loogu sameynayo waa mid taqtarku uu qofka u dirayo waxaana loo yaqaanaa qoraalka - M1 kaas oo fasaxaya in qofka la geeyo isbitaalka caafimaadka dhimirka, xataa haddii qofku uu u arko inuusan taas u baahneyn. Dayeelka khasabka ah ee qofka aan la weydiineynin inuu rabo iyo in kale waa mid naadir ah, waxaana lagu dhaqaaqaa haddii la arko in qofku uu khatar isku yahay ama uu dadka kale ku yahay.
Sharciga dhimirka wuxuu arinta dayeelka khasabka ah ka oranayaa sida soo socota: ”Qofka waxaa loo diri karaa dayeelka caafimaadka maskaxda ee khasabka ah oo kaliya haddii.
haddii la xaqiijiyo in qofku maskaxda ka jiran yahay (waalanyahay);
haddi qofku uu xanuunka dhimirka awgeed daryeel u baahanyahay isla markaasna haddii uusan helin daryeelkaas, ay keeni karto in qofka xaaladdiisu ka sii darto ama haddii qofku uu dhibaato u geysanayo caafimaadkiisa ama nabadiisa ama sidoo kale uu dhibaato u keenayo caafimaadka ama nabadgalyada dadka kale; isla
markaasna la waayo qaab kale oo daryeelka dhimirka oo ku haboon ama ay ku filaan-waayaan.”